Isetwe kwiholo yee-1900's yaguqukayo le ndawo iphezulu ye-boutique idibanisa yanamhlanje kunye nendala ukwenza istudiyo esinesitayile, esiqaqambileyo nesinomoya. Yonwabela indawo yakho yabucala yokuhombisa iiBBQ kunye nokuphumla elangeni. Kumgama nje omfutshane ukuya kwi-CBD yase-Adelaide, i-Adelaide Oval, isibhedlele saseRoyal Adelaide kunye nazo zonke iindlela zothutho lwe-pubic.
ILoft yinxalenye yeHolo eguquliweyo. IHolo ngokwayo yakhiwe malunga ne-1910 (uqikelelo olunzima) nguMbutho wePigeon waseMzantsi Australia. Ukutyhubela iminyaka yayithengiswa kwaye ingeyeminye imibutho xa ekugqibeleni, malunga ne-2004, yaguqulwa yaba yindawo yokuhlala.
I-Loft yayikade iyindawo ye-mezzanine yeholo kwaye emva komsebenzi omkhulu wokulungisa ngoku iyiyunithi entle kwaye eyilwe ngobuchule yokuzimela. Indawo ekhethekileyo ngokupheleleyo kwaye ayikho enye into efana nayo eAdelaide endiyaziyo. Enye iHolo yindawo yokuhlala yabucala kunye nekhaya kubamkeli bakho kunye noMurphy ikati.
Ndihlala kwiholo enkulu kwaye ndiyafumaneka ukunceda iindwendwe ezininzi iintsuku. Ndingacebisa ngezothutho, umtsalane wabakhenkethi, ukuthenga, iikhefi kunye neendawo zokutyela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mile End